China Iron oxide abamnyama 722/750 abavelisi kunye nabathengisi | IShencai Pigment
I-Ferrosoferric oxide, Chemical Formula Fe 3 O 4. Yaziwa njenge iron oxide emnyama, ziikristale ezimnyama ezinamandla kazibuthe, ikwabizwa ngokuba yi-magnetic iron oxide. Le nto inyibilika kwisisombululo seasidi, inyibilika emanzini, Isinyibilikisi seAlkali kunye nezinyibilikisi ze-organic ezinje nge-ethanol kunye ne-ether. I-oxide ye-ferrosoferric yendalo ayinakunyibilika kwizisombululo zeasidi kwaye kulula ukuyidibanisa ne-iron (III) oxide emoyeni kwiimeko ezimanzi.
1. I-Ferrosoferric oxide yinto esetyenziswa ngokuxhaphakileyo ngemagnethi. Ezenziwe ngokukodwa i-ferrosoferric oxide emsulwa zisetyenziselwa izinto zokurekhoda iiteyiphu kunye nezixhobo zonxibelelwano. Magnetite yendalo yinto ekrwada yokwenza isinyithi.
Isetyenziselwa ukwenza ii-primers kunye ne-topcoats.
Inzima kakhulu kwaye inokusetyenziswa njengerhabaxa. Sele isetyenziswa ngokubanzi kwicandelo elekhtrons lezeemoto, ezinje ngee-brake pads, izihlangu eziqhekezayo njalo njalo.
Ferrosoferric oxide iye yamkelwa kwicandelo lezinto ze-welding e-China, kuba i-electrode, imveliso yocingo isekwinqanaba lokuqala, amathemba emarike abanzi kakhulu.
I-Ferrosoferric oxide inokusetyenziswa njengombala kunye neepolisi. 3. Ukupakisha imveliso:
“SHENMING” uphawu olwenziweyo lomgubo wombala wentsimbi oxide omnyama u-722 unandipha udumo oluphezulu lweemarike kwaye iimveliso zithengiswa kakuhle kwilizwe liphela.
Ukuba unomdla ekuthengeni umgangatho ophezulu umgubo sombala oxide intsimbi emnyama 722 evela China, SHIJIAZHUANG SHENCAI PIGMENT mveliso
Igama loRhwebo YENTSIMBI OXIDE EMNYAMA
Isalathiso sombala Umbala omnyama 11 (77499)
Inombolo ye-CAS / i -EC No. 1317-61-9 / 215-277-5
Ukucaciswa Iziqulatho (Fe3O4) % 95
Res. Kwi-325 mesh % -0.5
Amanzi anetyuwa % -0.5
Ubunzima obuthile g / cm3 4.6
Egqithileyo i-iron oxide etyheli 311/313/920
Okulandelayo: I-iron oxide eluhlaza 5605/835